यस कारण हुन सकेन करिश्मा कपुरसँग अक्षय खन्नाको विवाह ? - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / यस कारण हुन सकेन करिश्मा कपुरसँग अक्षय खन्नाको विवाह ?
यस कारण हुन सकेन करिश्मा कपुरसँग अक्षय खन्नाको विवाह ?
‘हंगामा’, ‘हलचल’ र ‘दिल चाहता है’ लगायतका फिल्ममा काम गरिसकेको अभिनेता अक्षय खन्ना ४६ वर्षका भइसकेका छन् । आज उनी आफ्नो जन्मदिन मनाउने तयारीमा छन् ।
उनले सन् १९९७ मा मल्टिस्टार फिल्म ‘हिमालय पुत्र’ बाट बलिउडमा डेब्यु गरेका हुन् । जसमा हेमा मालनी, सतिश कौशल र जोनी लिभरको मूख्य भूमिका रहेको थियो फिल्मले बलिउड बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गरेको थियो । पहिलो फिल्मबाट नै उनलाई बेस्ट डेब्यु एक्टरको अवार्ड मिलेको थियो । कयौँ हिट फिल्ममा काम गरेका उनको फिल्मले चर्चा पाए पनि उनको जीवनमा अझै पनि जीवन साथीको कमि छ ।
४६ वर्षसम्म कुमार रहेका अक्षय खन्ना कपुर परिवारको ज्वाई बन्दा बन्दै रोक्किएका हुन् । एक रिपोर्ट अनुसार करिश्माको पिता चाहन्थे उनको छोरीको विवाह अक्षय खन्नासँग होस् । जसको लागि उनले विनोद खन्नासँग पनि विवाहको कुरा गरेका थिए । त्यो समयमा करिश्माले अभिनय गरेको हरेक फिल्म हिटको लिस्टमा थियो । यता, करिश्माको आमा बबिता भने यस सम्बन्धबाट खुसी थिइनन ।
बविताकै कारण करिश्मा र अक्षयको विवाहको कुरा बीचमै रोकिएको थियो । उनीहरु एक अर्कालाई मन पराउन थालेका थिए । तर केही समयपछि करिश्माको नाम अभिषेकसँग जोडियो । अभिषेककी आमा जया करिश्मा र अभिषेकको सम्बन्धसँग खुसी थिइन् । तर उनी विवाहपछि कश्मिाले फिल्ममा काम नगरोस् भन्ने चाहन्थिइन् यही कारण अभिषेक र करिश्माको सम्बन्ध पनि ट्ट्यो । अहिले करिश्माले संजय कपुरसँग विवाहपछि सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेकी छन् भने अक्षय खन्ना कुमार नै छन् ।
अक्षयले किन गरेनन विवाह एक अन्त्र्वातामा अक्षयले आफू जीवनभर विवाह नगर्ने बताएका छन् । उनले कारण बताउँदै भने–‘मलाई एक्लै बस्न मन पर्छ ।
म केही समयको लागि सम्बन्धमा बस्न सक्छु तर विवाह गरेर जीवनभर बस्न सक्दिन । ’ उनले विवाह नगर्नुको एक कारण बच्चा पनि रहेको बताएका छन् । उनलाई बच्चा मन नै पदैन ।
५.अनुहारको कालोपोतो कसरी हटाउने ? यि उपाय अपनाउनुहोस् सजिलै हट्छ
६.पेटको अल्सर हुदा ज्यान जान सक्छ, त्यसैले बेलैमा यस्ता उपाय अपनाउनुहोस् - जानकारीका लागी शेयर गर्नुहोला
७.बेलायतका राजकुमार फिलिपको अन्तिम संस्कार आज